Exclusive: Wajiga Cusub ee Faroole | KEYDMEDIA ONLINE
Keydmedia Online Exclusive - Telefishinka laga leeyahay Dalka Australia ee lagu magacaabo SBS ayaa wuxuu dhawaan soo saari doonaa Mashruuc Filim oo laga sameeynayo Abdiraxmaan Faroole iyo Caruurtiisa.
Qoraal lasoo gaarsiiyay Keydmedia Online ayaa waxaa ku qoran in Filimkaas ay duubayaan Koox u dhalatay Dalka Australia oo ka sheekeynaya Taariikh Nololeedka Cabdiraxmaan Faroole iyo Caruutiisa, asagoo la sheegay in uu halkaas ku noolaa mudo 20 Sano ah intuusan noqon Hogaamiyaha Gobollada Bariga Soomaaliya.
Filimkaan ayaa waxaa la sheegay inuu ku kacaayo Hal Malyan oo Dollarka Mareykanka ah, waxaana looga danleeyahay in dhulka laga qaado Sumcada darada "Image-ka" Cabdiraxmaan Faroole, lana muujiyo "Hormarka iyo Democraciyada" uu u horseeday Maamulka Puntland.
Waxaa kaloo la doonayaa in Filimka lagu muujiyo sida uu ula dagaalamay Cabdiraxmaan Faroole Burcad Badeeda Soomaaliya.
Jaraa'idka Aduunka, Maamulka Puntland waxey u yaqaaniin "Pirates Land" Dhulka Burcad Badeeda, waxaana laga qoray Qoraalo iyo Buuggag Xog badan xambaarsan. Buugi ugu dambeeyay oo Arintaas laga qoray, baaritaankii uu sameeyay ayaa waxaa ku cad Xiriirka Familka Faroole ay la leeyhiiin Burcad Badeed Soomaaliyeed.
Qoraaga Marc Engelhardt ayaa Xogta uu helay tilmaameysaa in Qoyska Faroole ay yihiin "Xididada iyo Tiirka" ay Burcad Badeedu ku tiirsantahay, wuxuuna ku sheegay inay yihiin Dalada ay harsato Burcad Badeeda Soomaaliya.
Buugu wuxuu kaloo ka hadlayaa Daqliga Dhaqaale ee kasoo gala Maamulka Faroole Maraakiibta la qafaasho inuu kor u dhaafay 100 Malyan oo Dollarka Mareykanka ah, Sanadkii!
Burcad Badeedu waxey kamid tahay Warshadaha Lacagta farahabadan laga sameeyo, waxaa 1994 laga Aas-Aasay Bariga Soomaaliya, Waxaana Abaabulkaas sameeyay Rag kasoo qalanjabiyay Jaamacadaha Talyaaniga kuyaala iyo Rag lagu sheegay inay lug ku leeyihiin Maamulka Puntland oo Heshiis la galay Maafiyada Talyaaniga.
Dhaqaalaha ugu badan ee Sanadihii lasoo dhaafay Soomaaliya ayaa wuxu kasoo galay Lacagta burcad-badeedka marka laga reebo Lacagta qurba-joogtu ay usoo diraan dadkooda gudaha dalka jooga.
Filimkaan la doonayo in kor loogu qaado Sumcada (Advertising and Propaganda) Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxaa sameyntiisa ku howlan Kambaniga lagu magacaabo Electric Pictures, Filimkaan oo soconaaya 1 Saac ayaa waxaa la yiraahdaa "Welcome to Puntland" waxaana soo saaray Victoria Pitt (Directer).
Sumcada Faroole, talow Dhulka malaga qaadi karaa...?